Jimicsiga Yoga Iyo Difaaca Jirka - Daryeel Magazine
Jimicsiga Yoga Iyo Difaaca Jirka
Jimicsiga oo dad badan aminsanyihin inuusan murqaha oo kaliya dhisan laakinse si wanaagsan u caawiyo dhamaan xubnaha ba’ni adaamka.
Jimicsiga Yoga oo badana loo isticmaalo in walwalka iyo walaaca badan leyskaga yareeyo hadaan lugu baabi’inba. Jimicisigan oo aad si fiican u barata wuxuu kugu cawiyaa in jirkaaga caafimaad buuxa had iyo goor yeesho. ‘Thymus’ oo ah xubinta u xil saaran difaaca jirka, Thymus ayaa ka difaaca jirka waxyaabaha qatarta ah. Hadaba jimicsigan gaarka ah oo aad sameysa waxey kugu cawineysa in firficooni zaa’id ah yeelato xubintas.
Jilbahaaga iyo gacmahaaga dhulka dhig sida ilma guurguuranya oo kale markas isku day inaa dhabarkaga kor u taagtid adoo godaaya isla markaasna. Markaas tartiib u neefso adigoo feerahaaga dabcinaya markad neefsaneeysid. Tan waxay kugu cawinaysa in si fiican laf dhabarkaaga u kala baxdo. Hada fahantay qaabkan waxa u jimicsada bisada.
Lugahaaga fidi gacmaahagana sida libaaxa u fariiso u fidi adigoo calooshaada dhulka ku dhajinaya madaxagana toosinaya sida kor ka muqata. Sidan ku sugnow ilaa aad neefsatid 12 – 15 jeer. Sidaani waxay aaminsanyihin dadka ciyaara jimicsigan in ay baabi’iso tabar darada ay sababan cudurada.
Dhabarkaga ku seexo adoo jilbahaaga kor u taagaya gacmahaagana toosinaya sida sawirka kor ka muuqata. Kabacdi dhabarkaga ka qaad dhulka adoo xoogsanaya gacmaha islmarkasna gacmaha dhulka ku haynaya. Sidan ku sugnow ilaa 12-15 mar oo aad si fiican u neef qaadatid. Jimicsigan waxuu u jimcinaya xabadka, qoorta, iyo laf dhabarka, isla markaasna ka yareynaya walwalka iyo tabardarada ka timaada jimicsi la’aanta.
Sida shiikhii u fariiso adigoo toosinaya dhabarkaaga tartiibna u neefsanaya waxad riixda xabadkaaga meesha kala barta. Meeshas ayaa ku aadan xubinta difaacda jirka ‘Thymus’. Riix ilaa mudo 2 daqiiqo ah.
Wax Ka Baro Faaidooyinka Qarsoon Ee Jimicsiga